SAINT BERNARD DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Saint Bernard Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Stella oo ah timo gaaban oo Saint Bernard ah oo jirta 2 sano
Saint Bernard waa ey weyn, xoog badan, muruqyo leh. Ilaa iyo inta uu miisaanka ku sii jiro dheellitirka dhererka, eeyga dheer ayaa ka qaalisan isaga. Madaxa weyni waa awood badan yahay. Afku wuu gaaban yahay, wuu ka ballaaran yahay inta uu dheer yahay. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Sanka waa mid ballaaran, oo leh dulal diiran oo ballaaran, oo sida bushimaha midabkoodu madow yahay. Indhaha dhexdhexaadka ah xoogaa dhinac ayaa loo dhigay waana midab madow. Dhegaha dhexdhexaadka ah ayaa sare loo dhigayaa, way dhacayaan oo wax yar ayay madaxa ka fogaanayaan. Lugaha waa muruq. Cagaha waa weyn yihiin oo leh suulasho xoog leh, oo qaansada leh. Dabada dhaadheer waa mid ballaadhan oo awood leh salka lagu hayo marka eygu dabco. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Waxaa jira laba nooc oo jaakad ah: mid qallafsan oo siman, laakiin labadooduba aad ayey u cufan yihiin waxayna la yimaadaan caddaan leh astaamo ku jira tan, cas, mahogany, brindle iyo madow, dhammaantoodna waxay isugu jiraan noocyo kala duwan. Wejiga iyo dhagaha badanaa waa madowyihiin. Eeyaha ey sida adag u daboolan yihiin, timaha ayaa waxyar ka dheer oo bawdo iyo bawdo ayaa ka muuqanaya.
Saint Bernards waa kuwo aad u jilicsan, saaxiibtinimo leh aadna u dulqaad badan carruurta. Waxay yihiin kuwa gaabis ah, dulqaad badan, adeecsan, aad u daacad ah, jecel oo diyaar u ah inay ka farxiyaan. Hubso inaad is dhexgal tarankaani si aad u wanaagsan ayuu u da 'yaryahay dad iyo duunyo kale. Waa caqli sarre oo fudud in la tababaro si kastaba ha noqotee, tababbarku waa inuu bilowdaa xilli hore, halka eygu weli yahay cabbir la maareyn karo. Bar eygan ha baran ku bood bini'aadamka laga bilaabo puppyhood. Maskaxda ku hay in eyga aan amar ku taaglayn ee baaxaddiisu leeg tahay uu dhibaato u keenayo xitaa qof weyn oo xoog leh haddii lagu samaynayo meelaha caamka ah xadhig , markaa si toos ah u xakamee bilowga, adoo baraya eeyga ciribta. Saint Bernard waa ilaalin fiican. Xitaa cabirkiisu waa ka hortag wanaagsan. Way fooraraan markay cabaan ama cunaan. Hubso inaad ahaatid eeyga hogaamiyaha xirmada . Eydu ma rabaan wax ka badan inay ogaadaan maxaa laga filayaa iyaga iyo St Bernard waa mid aan ka reebanayn. Oggolaanshaha eey cabbirkan iyo baaxaddiisu le'eg tahay mid aan amar lahayn waxay noqon kartaa mid khatar ah waxayna muujineysaa xirfadaha lahaanshaha oo liita. Saint Bernards waxay leeyihiin dareen ur wanaagsan oo horumarsan waxayna sidoo kale umuuqdaan inay leeyihiin dareen lixaad oo ku saabsan halista soo socota ee duufaanta iyo qulqulka.
Dhererka: 25.5 - 27.5 inji (61 - 70 cm)
Miisaanka: 110 - 200 rodol (50 - 91 kg)
U nuglaanshaha 'wobbler' syndrome, dhibaatooyinka wadnaha, dhibaatooyinka maqaarka, sinta dysplasia, burooyinka iyo soo bixitaanka — laab ka baxsan cirifka indhaha, badanaa daboolka hoose. Caloosha qaloocsan waa in la daaweeyaa. Sida eydaasi yihiin u nugul ubax , waxaa ugu wanaagsan in la quudiyo laba ama seddex jeer oo yar maalintii halkii laga siin lahaa hal cunto oo weyn.
Jarmalka adhijir madow iyo tan
Saint Bernard wuxuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Eeyahaani waa kuwo aan firfircooneyn gudaha gudaha iyo daarad yar ayaa ku filan. Waxay ku noolaan karaan banaanka, laakiin waxay doorbidi lahaayeen inay la joogaan qoyskooda. Waxay leeyihiin dulqaad hooseeya cimilada kulul, qolalka diiran iyo baabuurta. Hindhiso iyo khuuro.
Dheer soco maalin kasta ayaa loo baahan yahay si loogu ilaaliyo Saint Bernard xaalad maskaxeed iyo mid jireed oo wanaagsan. Eydu maahan inay jimicsi badan yeeshaan hal jeer illaa ay lafahoodu si fiican u dhismayaan oo xoog yeelanayaan. Socodyo gaagaaban iyo fadhiyo gaagaaban oo kooban ayaa ugufiican illaa eygu qiyaastii yahay laba jir.
Qiyaastii 8-10 sano
Qiyaastii 6-10 eyyo
Labada nooc ee jaakadku way fududahay in la xajiyo. Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Shaambo way ka goyn kartaa jaakada saliida, astaamaha u adkeysiga biyaha, marka isticmaal saabuun fudud. Indhaha, oo laga yaabo inay u janjeeraan biyaha, waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah si ay u ahaadaan kuwo nadiif ah oo aan lahayn wax xanaaqa. Noocani wuxuu daadiyaa laba jeer sanadkii.
The Saint Bernard waxaa la aasaasay 980 AD by St. Bernard de Menthon oo ay ku riyoodeen suufiyadu, waxay u badan tahay inay ka gudbaan qadiimiga Mastiff Tibetan leh Daanyeer Weyn , Dog Swiss Mountain weyn iyo Pyrenees weyn . The Alpine Mastiff , ah bakhtiyey Molosser eyga waa aabbaha ilaa maanta casriga ah ee Bern Bernard. Saint Bernards-kii ugu horreeyay waxay ka mid ahaayeen noocyo gaagaaban, maaddaama jaakadda noocyada dhaadheer ay u egtahay inay soo uruuriso icicles. Waxay isticmaali jireen Hospice, oo ah meel ay ku magan galaan dadka safarka ah ee maraya marinka halista ah ee Alpine ee udhaxeeya Switzerland iyo Talyaaniga. Bartamihii qarnigii toddoba iyo tobnaad, Saint Bernard wuxuu caan ku noqday eeyga badbaadinta ee ka shaqeynaya inuu dadka ka badbaadiyo qulqulka barafka barafka u dhow Hospice. Eeyadu waxay awoodaan inay uriyaan qofka cagaha badan oo baraf ah. Waxay badbaadiyeen kumanaan dad ah oo baaraya iyo helitaanka musaafiriin lumay ama dhaawacmay. Eeyadu waxay ku shaqeyn lahaayeen baakado iyagoo raadinaya dhibbanayaasha. Markii la helo way leefleefi jireen oo la jiifsan jireen si ay diirimaad ugu helaan. In kasta oo eey ama in ka badan ay la jiifsan doonaan jirka (eeyaha), eey kale ayaa dib ugu laaban doona Hospice si uu ugu wargaliyo inay heleen dadka. Koox badbaadin buuxda ayaa markaa la diraa. Saint Bernard ayaa sidoo kale lagu yaqaanay inuu saadaalin karo duufaanka iyo qulqulka. Tani waxay suurtogal u noqon kartaa awoodda eygu inuu maqlo dhawaqyo aad u hooseeya oo aadanuhu uusan maqli karin. Saint Bernard waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1885. Qaar ka mid ah awoodaha Saint Bernard waa raadinta iyo samatabbixinta, eeyga ilaaliyaha, ilaalada iyo gaadhiga.
George the Saint Bernard puppy at 7 bilood jir— 'George waa ardayga ugu fudud ee gadaal loo dhigo !! Xaqiiqdii waa inaad siisaa qaddarin si uu u kaco oo u socdo! Isagu waa saaxiibtinimo weyn shisheeyaha iyo xoolaha kale oo isagu wuu jecel yahay carruurta !!!
George the Saint Bernard puppy at 7 bilood jir
Jimmy the purebred Saint Bernard at 1 sano jir ka yimid Hindiya
Hercules 5 bilood iyo ardayga cusub Dr. Seuss AKA Doc oo ah eey 7-toddobaad jir ah
Leo the Saint Bernard oo 2 sano jir ah milkiilahiisa ku faraxsan Hindiya
Leo the Saint Bernard oo ah eey
Saint Bernard eey
Eeg tusaalooyin badan oo Saint Bernard ah
rumaanka iskutallaabta shih tzu iib ah
eeyo dane oo mucjiso ah oo iib ah
celceliska miisaanka baakada spaniel
johnson iyo scott american bulldog
adhijirka jarmalka iyo feeryahan isku qasan eeyo
adhijir Australia qas chihuahua muqisho